अनशनको १४औँ दिन डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या – Puleso
अनशनको १४औँ दिन डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या
जुम्लामा १४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या देखिएको छ । बुधबार सामान्य अवस्थामा रहेका केसीको बिहीबार मुटुमा समस्या देखिएको हो ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सक सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार बिहीबार केसी निकै सिकिस्त भएको बताए ।केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि डा. क्षेत्री जुम्ला गएका थिए । उनका अनुसार बिहीबार दिनभर केसी बोल्न सकेनन् । मुटुमा समस्या भएका कारण उनको बोलीमा समस्या आएको डा. क्षेत्रीले बताए ।
डा। गोविन्द केसीको उपचारमा कठिनाइ भएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले एयरलिफ्ट गर्न सल्लाह दिएका छन् । डा.केसीले सल्लाह नमानेका कारण स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकाले चिकित्सकहरू पूजनकुमार रोकाया, धीरज गुरुङ, सिद्धार्थ खाती र नीराजन महासेठले एयरलिफ्ट गर्न सुझाब दिएका हुन् । केसीको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार आइसियूको आवश्यकता परे पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियू छैन ।
अनशनरत डा.केसीले माग पूरा नहुँदासम्म जुम्लामै बस्ने बताएका छन् । बुधबार र बिहीबार सरकारले केसीलाई ल्याउने प्रयास गरे पनि उनकै अडानका कारण सरकारी प्रयास सफल हुन सकेन । सरकारले केसीलाई काठमाडौं ल्याएर संवाद गर्ने बताएको छ । तर, जुम्लामा माग पूरा गरेर मात्रै काठमाडौं फर्किने उनको अडान छ । ‘माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं जाने मनस्थितिमा केसी हुनुहुन्न,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले सरकारले काठमाडौं लाने भन्ने विषय टाढाको कुरा हो ।’नयाँ पत्रिका